Andron’ny vehivavy : navondrona tao Antsirabe ny fankalazana | NewsMada
Niavaka tsy toy ny isan-taona ny fanamarihana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy eran-tany ho an’ny faritra Vakinankaratra, omaly. Hatramin’izay, samy nankalaza ity andro ity ireo vehivavy isaky ny distrika fito mandrafitra ny faritra. Omaly, navondrona tao Antsirabe renivohitra teo amin’ny kianjan’ny Fahaleovantena ny fankalazana. Nanana solontena
avokoa ireo fikambanam-behivavy avy any amin’ireo kaominina ao anatin’ireo distrika fito : Antsirabe I – II, Betafo, Mandoto, Faratsiho, Antanifotsy ary Ambatolampy. Reny mpiahy ny lanonana ny vadin’ny lehiben’ny faritra, Andrianjanaka Irène.
Nisongadina nandritra ny kabary samihafa ny hoe : tsy hambakain’ny lehilahy amin’ny fampandrosoana ny sehatra misy azy avy. Namarana ny fotoana ny fanomezana sakafo sy lamba fitafy ho an’ireo vehivavy voafonja eny amin’ny fonjaben’Andohatany ao Antsirabe. Nahazo ny anjarany koa ireo tovovavy nania ka beazina ao amin’ny toerana voatokana eny Andohatany ihany.